सल्यान अस्पतालमा थन्कियो एक वर्षदेखि भेन्टिलेटर – Sky News Nepal
सल्यान अस्पतालमा थन्कियो एक वर्षदेखि भेन्टिलेटर
२६ भाद्र २०७८, शनिबार १४:२६ मा प्रकाशित
दीपक शर्मा/ सल्यान । सल्यान जिल्ला अस्पतालमा विगत एक वर्षदेखि भेन्टिलेटर थन्किएको छ ।
जनशक्ति र भवनको अभावका कारण ६ वटा भेन्टिलेटरसहित आइसियुका सामाग्री थन्किएका हुन ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका भेन्टिलेटर सहितका सामाग्री कोठामा थन्किएर बसेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका तत्कालीन समस्यालाई भन्दा बिना छलफल पठाइएका सामाग्री आउँदा प्रयोग विहीन भएको सल्यान जिल्ला अस्पतालका डा. प्रदीप शर्माले बताए । उनले भने, “हामीसँग भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने न जनशक्ति नै छ न व्यवस्थापनका लागि भवन नै छ ।”
अस्पतालका तत्कालीन आवश्यकताभन्दा बाहिरका सामान आउने गरेको शर्माले बताए ।
एउटै भेन्टिलेटरको मूल्य २५ लाखभन्दा बढी पर्छ । जुन छ वटा पठाइएको छ भने । इलेक्ट्रिक आइसियु बेड जुन एउटै बेडको एक लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म पर्छ । करोडौँ खर्च गरेर ल्याएका सामान एक वर्षदेखि प्रयोग विहीन भएको डा. शर्माको भनाई छ । महत्त्वपूर्ण सामाग्री प्रयोगमा नल्याए सामान आफैँ बिग्रँदै जाने उनको भनाई छ ।
यता जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले भने कोरोनालाई मध्यनजर गरी सामान आएको बताएको छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त समान आएको र आफूहरूलाई उपलब्ध भएको सिलिङलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले बताए । जनशक्ति र भवनको अभावका कारण समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, “अबको केही समय भित्रै भेन्टिलेटर र आइसियुका लागि भवन निमार्ण हुन्छ ।”
भवन निमार्णका लागि टेन्डर भई सम्झौता समेत भइसकेको बताउँदै भवन निमार्ण लगत्तै ती स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोगमा आउने उनले बताए।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने आँकलनसहित ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्री उपयोगमा आउने अस्पताले जनाएको छ ।
अस्पतालमा ६ शय्याको भेन्टिलेटर र १५ शय्याको आइसियु निमार्ण गर्न प्रदेश सरकारले २ करोड ५८ लाख बढीको स्वास्थ्य सामाग्री पठाएको छ ।